Waa Kuwan LABADA Ciyaaryahan Ee Ay Seefta Tababare Zidane Qaadi Doonto Suuqan Kaddib Markii Qorshaha Kooxdiisa Lagu Wargeliyay - Gool24.Net
Waa Kuwan LABADA Ciyaaryahan Ee Ay Seefta Tababare Zidane Qaadi Doonto Suuqan Kaddib Markii Qorshaha Kooxdiisa Lagu Wargeliyay
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa lagu soo warramayaa in loo sheegay inuu marka hore iibiyo qaar kamida xiddigaha kooxdiisa si uu uga sameeyo lacag uu suuqa xagaagan ku galo isla markaana dhiig cusub ugu soo kordhiyo safkiisa.
Labada ciyaaryahan ee ay ugu badan tahay in laga saari doono albaabka Santiago Bernabeu ayaa ah Gareth Bale iyo James Rodriguez oo uu tababaraha ree France xilli ciyaareedkan soo muujiyay inaysan qorshayaashiisa ku jirin.
Bale ayaan gabi ahaanba kamid ahayn xiddigaha uu ku tashanayo Zidane isagoo dhawr mar xilli ciyaareedkan ka reebay liiska xiddigaha uu kulamada ugu dagaal galayay oo uu kamid ahaa kulankii ugu dambeeyay ee ay Man City la ciyaareen Champions League.
Si lamid ah Rodriguez ayaa ku fashilmay inuu wax kalsooni ah ka helo tababare Zidane iyadoo lala xidhiidhinayo inuu u dhaqaajinayo dhinaca horyaalka Premier League.
Sida uu sheegayo wargeyska caanka ka ah Spain ee Marca, markasta oo uu Zidane iibiyo xiddigaha aan muhiimada badan ka dhex lahayn kooxdiisa ayaa noqon doonta markasta oo uu sii badsado lacagaha uu suuqa ku gelayo.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in madaxda sarre ee Los Blancos ay Zizou u sheegeen inuu ciyaartoyda aan qorshihiisa ku jirin oo dhan iibiyo kahor inta uusan bar-tilmaameedsan kuwo kale.
Tusaale ahaan, Madrid ayaa xagaagii 2019 iibisay xiddigo kamid ahaa safkeeda koowaad oo kala ahaa Mateo Kovacic oo Chelsea ku biiray, Keylor Navas oo PSG u wareegay iyo Marcos Llorente oo Atletico Madrid ka degay.
Iibka saddexleydaas oo ay Los Blancos ka heshay 135 Milyan oo Pound ayaa ka caawiyay kooxda saxeexyada xiddigo ay kamid ahaayeen Eden Hazard, Ferland Mendy, Eder Militao iyo Luka Jovic.